Chii Inonzi Ip Address (2019-03-23 18:03:05)
Kugamuchirwa Kwangu Ip Blog (2019-02-16 18:02:11)
Chii chinonzi IP
Izwi rokuti "IP rinowanzoshandiswa mumamiriro ezvinhu emakombiyuta. IP inomirira Internet Protocol, uye iyo ndiyo mitemo yemitemo inosarudza nzira iyo data packets ichadzoka nayo kuburikidza nehutaneti. chigadzirwa paIndaneti kana mumutambo.Tichafamba nemashoko eI IP, marudzi ePI nemamwe maonero akafanana nawo, uye kunzwisisa kuti chii chiri chinhu chakakosha chekukurukurirana kwekombiyuta.P IP ndeyekuunganidza mitemo inonzi protocol. Zvigadziriro zvinotsanangura mamwe maitiro maererano nezvinodiwa nemashandisirwo emaketani uye data packets kutumira pamusoro pemaketheni.Nyika ino, pane vanoverengeka vanogadzirisa maikiriti emagetsi, uye mumwe nomumwe wavo ane teknolojia yavo, maitiro ekushandura, uye mapurikiti avanoshandisa kuvakira matanho avo, asi pavanomhanya pamusoro pemaketani, vanofanirwa kutevera mamwe maitiro anochengeterwa neInternet Protocol (IP).
IP Address uye kushandiswa kwayo
Nekwenyanzvi, kero ye IP ndiyo imwe nhamba ye32-bit inogoverwa kune chiguniti kana yakabatanidzwa kune network. Sezvo kero yeimba inoshandiswa kugona nzvimbo chaiyo yepanyika, nenzira imwecheteyo IP address inoshanda sechiratidzo chaicho chechigadzirwa. Kushandisa iyi kero, chigadziri chinoratidza kero yevose vanotumira uye vanogamuchira data packets. A network data packet isuniti yedata inotakura mashoko ekudzora uye data user pamusoro pe IP based network. Kana dhesi inotumirwa kubva pane chimwe chinhu kusvika kune imwe sdivashoni, PC yako inoshandisa DNS server kuti ione zita rehostname kuti iwane IP address yayo. Pasina IP kero, chigadziro hachizozivikanwi pamusoro pemaketani uye hachigoni kutaura. Zvisinei, izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nemichina uye network. Panguva imwe chete, PC yako inogona kuva neinopfuura imwe kero dze IP. Imwe yeLAN nezvimwe zveInternet. Aya maIndaneti anowedzera kugoverwa kuva miviri miviri mikuru:
Sezvo zita racho rinomiririra, iyo static IP aderesi iyo yakarongeka yeIndaneti dzisingamboshanduki kana dzakatumirwa kune chigadzirwa pamusoro pekambani. Simba yeIndaneti yekombiyuta haisi iyo yakadhura asi yakasununguka kune ngozi dzekuchengeteka kune avo vanoda kuvanza pamutambo. Iyo inowanzoshandiswa nehuwandu hwewebhu, mitambo, uye ma-server maseri.
Kune rumwe rutivi, Dynamic IP aderesi ndiyo iyo ma kero ye IP inoshandura nguva dzose kana chigwaro chichipinda mumutambo. Masangano makuru kwazvo anoshandisa mashandisi eE IP akasimba nekuti yakachengeteka kupfuura IP static uye haigarisi yakafanana; saka nzvimbo yacho haigoni kuwanikwa.
Static IP vs Dynamic IP iyo iri nani?
Sezvakakurukurwa pepakutanga, chimiro chemamiriro akakomberedzwa anosarudza, ipi iyo IP inofanira kushandiswa. Kana pasina kukanganisa nehutukutu uye pasina chikonzero chekuzvivanza kubva pakutevedzwa kuburikidza nemutambo, ipapo IP static ichashanda zvakanaka kwauri. Asi, kana iwe uchida kuchengetedza unhu hwako pamusoro pewebhu uye uende kuburikidza nehutano hwakachengetedza mamiriro ekutengesa, ipapo Dynamic IP ichava yakanakisisa sarudzo yako. Kazhinji, kushandura paIndaneti, kutumira kana kukanda mafaira kunoitwa nePI yakaoma, kune rumwe rutivi, FTP, sevhisi, uye izwi rinoshevedza kuburikidza neInternet zvinoitwa neStatic IP. Mirairo yakadai se IPV4 ne IPV6 inoshandiswa kubudisa IP mazita emakona emagetsi. Aya mapeji eI inotsanangurwa pasi apa.
IPV4 Address (Internet Protocol 4)
IPV4 (Internet Protocol 4) ndiyo yechina ye Internet Protocol (IP) inoshandiswa kubudisa mazita kuti igove kune zvishandiso kune imwe yenhare. IPV4 inoshandisa 32-bit address svondo kuti ibatanise zviyero kune internet. Tsamba ye32-bit inoreva madhita anenge ane mabhiriyoni e4 anogona kubudiswa. Nhamba dzinoratidza kuti kuburikidza nekukura kwakakura kwezvinhu zvesayenzi, IPV4 haizokwanisi kutarisa mapiritsi ose nokuti makombiyuta evanhu, makombiyuta, mafoni ezvimwe zviyero anoshandisa IPV4 kuti iungane kune internet. Kuti akunde izvi zvishoma, Internet Protocol yakavandudzwa, uye imwe itsva IPV6 yakagadzirirwa kuunza mazita.
IPV6 Address (Internet Protocol 6)
IPV6 address (Internet Protocol 6) ndiyo itsva internet addressing inogadziriswa kushandiswa kuti iwane zvinodikanwa nekombiyuta ye internet. IPV6 is a modified form of IPV6 uye inobvumira nhamba yemagamba pamwe ne data traffic kuparidzirwa. IPV6 address inonzi IPng (internet protocol next generation) uye iri kushandiswa. Kune zvimwe zvinobatsira zve IPV4 pamusoro pePV6 yakadai seNo DHCP uye NAT, Chokwadi Quality Service (QoS).
Chii chinonzi TCP / IP
TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ndiyo inoshandiswa purogiramu ye internet. Inoita kuti hutano huve hwakavimbika uye hapana puroti yekurasikirwa. Mukana wekukundikana kwemapakiti, inodzorerazve data kuti ichengetedze kuvimbika kwekubatanidza. Makombiyuta maviri akabatana nokuda kwekutumira shoko kana kugoverana ruzivo, anopa kopi yeprogram yeTCP / IP. TCP / IP ine zvidimbu zviviri: Ipamusoro Pasi ndeye TCP uye inosungirwa kuunganidza data muzvikamu zviduku uye kuisazve zvikamu zvose muzvinyorwa zvepakutanga asi kune rumwe rutivi IP sarudzo inotarisira kugadzirisa kero yekambani ye packet uye inoita kuti iyo data inotumirwa kunzvimbo yakakodzera. Pamusana pekuvimbika kweiyo protocol, inoshandiswa.
UDP (User Datagram Protocol) ndiyo protocol inoshandiswa kune TCP uye inobvumira kudhinda kudarika pasina kutarisa iko kwezvikanganiso. Iyo inopesana nezvakavimbika uye inorega donho yepaketani, asi inopa zviri nani latency mutengo. Pamusana peizvi, inoshandiswa kumitambo nekushambadzira kwepaIndaneti.
Internet Protocol neInternet Protocol Addresses ndiwo chikamu chikuru che Computer Networks uye Communications. Vanopa ruzivo runobatsira pamusoro pezvikwata zvavo zvinoenderana uye izvo zvinobatsira pamwe nehomwe yekutyisidzira. Dynamic IP uye Static IP inosarudzwa maererano nemamiriro ezvinhu, uye nzira ye data packets transmission inotsanangurwa neTCP / IP kana UDP / IP modules.